राज्यले आफ्ना माग नसुनेको भन्दै वडाध्यक्ष अनशनमा ! | NewsKarobar
गृहपृष्ठ राज्यले आफ्ना माग नसुनेको भन्दै वडाध्यक्ष अनशनमा !
राज्यले आफ्ना माग नसुनेको भन्दै वडाध्यक्ष अनशनमा !
माडीवासीको अति आवश्यक मागप्रति राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै माडी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल सहितले आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।
पछिल्लाे - बाजुरा र हुम्लाको सिमानामा भूकम्पको धक्का
अघिल्लाे - जनमतको दुरुपयोग गर्दै सरकार कम्युनिष्ट पद्धतितर्फ उन्मुख भयो : पौडेल